u-Shamsi uyathemba ngekusasa lama-Proteas
Mon, 07th September 2020
Tabraiz Shamsi of South Africa during the 2019 Cricket South Africa Media Day at the Tshwane University of Technology Cricket Oval , Johannesburg on the 04 September 2019 ©Muzi Ntombela/BackpagePix
Oshwiba i-spin kuma-Proteas u-Tabraiz Shamsi uthi ukuhlonipha imibono yawonke umuntu yilokho ahamba nakho kwikhempu yosiko eyabanjelwa e-Skukuza.
Abantu abawu-32, iqembu le-High Performance belihlangene nabadlali abanamankontileka kwiqembu lesizwe neqembu le-South Africa A, kanye nabadlali abakhonjwa ngokuba ezinhlelweni zakusasa, yaphela ngo-Agasti 22.
i-values system ethuthukile ekade Inhlonipho, Uzwelo kanye Nokwamukeleka kwagqanyiswa njengezinsika eziphambili ngesikhathi behlangene.
“Ngicabanga ukuthi kimina, okukhulu ukuthi njengeqembu sabona ukuthi kunamandla ekwazeni ukuxoxisana, kunokuthi sihlale sizitshele ukuthi siyazi,” kusho u-Shamsi. “Uma sesikhiphe imibono yethu kanye nokuqonda izinto ngokubona komunye umuntu, izinto zikhanya kakhulu futhi kubalula kakhulu ukuthi sikwazi ukuqonda ukuthi baqhamukaphi abanye, ubuhlungu buqhamuka kuphi, nenjabulo iqhamuka kuphi.”
“Isiyonke, yilokho okukhulu engahamba nakho. Kunokuthi umuntu aphawula ngaphandle kokuqonda ukuthi uqhamuka kuphi omunye umuntu, kungcono ukuvele uhlale futhi ulalele ukuthi bona babona kanjani bese uqhamuka nesiphetho sakho.”
Inkulumo-mpikiswano yobuhlanga kanye nezikhalo zabadlali abadlule yokucwaswa kwagqama enyangeni edlule. u-Shamsi uyakumukela ukuthi okwenzeka kulabo badlali akumele kuzitshwe.
“Ngicabanga ukuthi kubalulekile njengeqembu ukuxoxa ngobuhlanga kanye nokucwasa ngobuhlanga,” esho echaza. “Ngoba nokho kunzima ukukhuluma ngakho, okusalayo kuyingxenye enkulu yaseNingizimu Afrika ngenxa yomlando wethu. Sasihlukene kamuva futhi kubalulekile kithina njengeqembu ukuthi sikhulume ngakho.”
“Kwisimo sama-Proteas, angikaze ngicwaswe ngokohlanga. Abadlali abadlule bakhulumile ngakho nokuthi izinto zazingalingene kanye nezinto ezifana nalokho. Ngicabanga ukuthi nabadlali abafinyelela, kwakumele badlule kwizithiyo okwakungamele badlule kuzo uma izinto zazilingene.”
“Yilokho okukhulu okumele sikuvume futhi sikuqonde. Kumele siqiniseke ukuthi izinto ezifana nalezo asizimeli futhi zikhishwe kuhlelo. Njengesixuku sabadlali, kumele sakhe lelobhamuza futhi siqiniseke ukuthi akwenzeki.”
“Kumele siqonde ukuthi simunye futhi siyolwa njengeqembu, ukulwelana kanye nokulwela izwe lethu. Kumele siqonde ukuthi siqhamuka kuphi.”
Lomdlali oneminyaka ewu-30, onezinti eziwu-49 emidlalweni ewu-46 kuzona zonke izinhlobo zekhilikithi kuma-Proteas, uphinde abe nethemba ngekusasa leNingizimu Afrika nokho iqembu lidlula kwinguquko kulandela ukuthatha imihlalaphansi abadlali abaningi abakhulile.
Abadlali abafana no-JP Duminy, u-Hashim Amla, u-Morne Morkel, u-Vernon Philander no-Dale Steyn bonke bathathe umhlalaphansi kamuvana, kodwa u-Shamsi uzwa sengathi abadlali abancane abafikayo banekhono lokuhlela kahle izinto.
“Hlezi sifuna ukuthuthuka kanye nokubangcono,” esho enezezela. “Sisendaweni enhle okwamanje lapho abadlali bethu abaningi abakhulile bathatha imihlalaphansi ngokulandelana futhi isipiliyoni yinto ongakwazi ukuyithenga.”
“Yebo kushiya isikhala esikhulu, abekho abasemuva kwalabadlali, kodwa ngicabanga ukuthi ngendlela engibuka ngayo, siyiqembu elincane lapho abadlali abaningi bangadlala indima.”
“Ngingumuntu obona okuhle futhi lokhu kusishiya endaweni ehlukile. Okwamanje asaziwa futhi ngoba kunabadlali abaningi abasha, lokho akumele kube yinto embi. Sonke siyazana njengoba sabhekana kwikhilikthi yama-domestic isikhathi eside ngakho ngicabanga ukuthi singalindela ikusasa eligqamile.”
Faf du Plessis was unable to join the team due to the birth of his second daughter.
u-Van der Dussen ukulindele ukuhlola okusha kwi-"Proteas way" "Sidinga ukunqoba imidlalo" - u-Ngidi Kungiqinisile ukulimala – u-Ngidi u-Verreynne ubonga akufunde kuma-Proteas u-De Kock uzoba ukapteni wama-Proteas weqembu lama-T20, kubuya u-Steyn kwabizwa u-Magala no-Van Biljon kuma-T20 Ukuma kweqembu lama-Proteas kuma-ODI Babizelwe i-Test yokugcina abadlali abadedelwa kuma-Proteas i-CSA imemezela iqembu elifanayo lama-Proteas kuma-Test asele kwi-series u-Petersen ubizwe okokuqala kuma-Proteas u-Boucher ugculisekile ngenqubekelo phambili yama-Proteas u-Hamza uletha ukukhanya ekushayeni kwama-Proteas